पश्चाताप | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: पश्चाताप ★ कृष्ण के.सी.★ प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ७, २०७३
लेखक : कृष्ण के.सी. विधा/श्रेणी : कथा रचना संख्या : 12 प्रकाशन मिति : बिहीबार, पुस ७, २०७३ कृष्ण के.सी.का अरु रचनाहरु ‘म लड्दा तिमीले उठायौ भने, बिरामी हुँदा तातो पानी दियौ भने र म मर्दा एक तुर्को आँसु खसालिदियौ भने पो तिमी र म हुनुको अर्थ हुनेछ,’ एकै सासमा यति बोलिसकेपछि थाकेर गलेका आँखाले मलाई पुर्लुक्क हेर्‍यो ।
मन भक्कनियो । मुटु बेतोडले धड्कियो । फुङ्ग उडेको उसको मुहार एकनासले हेरिरहेँ । कति दिनदेखिको भोको थियो ऊ । उपचारको अभावमा गलेको थियो । उसको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा मनभरि एकनासले कुरा खेलिरहे । दह्रो मुटु बनाएर उसको हात च्याप्प समाई छेउमै बसिरहेँ । निर्दोष मनको न्यानो स्पर्शले ऊ भुसुक्कै निदायो ।
स्थान उही, वातावरण फरक । जोडी उही, मन फरक । विश्वास उही तर समय फरक । विगत कोट्याउँदा वर्तमान बेस्कन दु:खेर आयो । अघाउन्जेल कोठाभरि नियालेर हेरेँ मेरा मिहिनेत र पसिनाका सिर्जनाहरू । केवल कहीँ कतै नमेटिने दाग बनेर मेरै पर्खाइमा बसिरहेको भान भइरहेको थियो ।
फरक मन र फरक विचार जब एक बनेर यो घरभित्र चित्रित हुन्थे, त्यतिवेला अधुरा र अपूरा सिर्जनाहरू पनि आफैंमा मुस्कुराइदिन्थे । समयका असीमित घेराहरूलाई मापन गर्न नसक्दाको परिणाम,सँगै हिँड्दा लागेको ठेस आज पर्यन्त दुखिरहन्छ । जब विश्वासहरू अविश्वासमा परिणत हुँदै गए, यही घरका भित्ताहरूमा मैले कोरेका सपनाहरू नदेखिने गरी पोतिएर विलीन हुन पुगे ।
जतिबेला मैले उसलाई भेटेको थिएँ, नितान्त एक्लो थियो । चिनारीको कुनै पृष्ठभूमि थिएन । जिन्दगीका अनगिन्ती मोडहरूमा देखादेख भइरहँदा कतिबेला मेरो मनभित्र बस्यो, थाहै भएन ।
सपनाको महासागरमा पौडिनै परेन । हात दिएँ, सहर्ष थामिदियो l विश्वास भरिएको गमला लिएर यही घरलाई पवित्र मन्दिर ठान्दै आफ्ना पदचापहरूलाई विश्राम दिएकी थिएँ ।
काउकुती मात्र लागिरहने अनौठा थिए साथका ती सुरुवाती दिनहरू । बार्दलीभरि लहरै राखिएका गमलाका फूलहरू पनि हामीबीचको अद्भूत संगमलाई देखेर बेप्रवाह फुलिदिन्थे । फुलेका फूलका थुङ्गामा ऊ जति आकर्षित भइदिन्थ्यो त्यति नै म पनि समाहित भइदिन्थेँ । लाग्थ्यो, जिन्दगी भनेकै यहिरहेछ l
थकान जतिसुकै किन नहोस्, बिहान उठेर आफ्ना छरपष्ट केश सम्हालेर गुजुल्टो बनाउँदा सबै थकान त्यही गुजुल्टोमा पोको परेर थन्किएको महसुस हुन्थ्यो । भरणपोषणको कुनै चिन्ता थिएन । न त आफन्त र नातेदारको बन्धन थियो ।
ऊ दिनभर कमाउँथ्यो र बेलुका झोलाभरि खुसी ल्याएर मेरा पोल्टाभरि राखिदिन्थ्यो । जति समय म ऊसँग रहे पनि मलाई न त कुनै रहर देखाएर लोभ्यायो, न त कुनै सपना देखाएर झुलायो । मान्छे साच्चिकै बिन्दास थियो ।
टुहुरो थियो l समयका अत्यासलाग्दा यात्राका अप्ठ्यारा पहराहरू जसरी छिचोलेको थियो । तर, तिनै भिरपाखाहरूसँग सधैं डराएर वर्तमानको बाटो तय गर्नु उसको कमजोरी थियो l सानैमा टुहुरो हुनु, समाजबाट टाढिएर एक्लिनुमा तिम्रो कुनै दोष होइन भनेर मैले धेरै पटक सम्झाउने कोशिस पनि गरेकी हुँ । तर, आफ्नो बाटोबाट कत्ति पनि हलचल हुन चाहेन ।
आफूले जसरी जीवनका यात्राहरू छिचोल्यो, त्यही नै जिन्दगी हो भन्ने अति संकीर्ण विचार नै हाम्रो बिछोडको कारण बन्न पुग्यो l प्रेममा उसले म बाहेक अरु कोही नदेख्नु मप्रतिको निस्वार्थ माया वा आशक्ति होला । तर, त्यसो भनेर म पनि ऊ जस्तै समाजबाट टाढिएर बस्न पनि त मिल्दैनथ्यो l चाहेर पनि स-साना कमजोरी सच्याएर जान नसक्नु नै हाम्रो बिछोडको कारण बन्न पुगेको थियो ।
खै ती मेरा परिश्रमले रङ्ग्याएका गमलाहरू कतै देखिँदैनन् l सायद आफूले नदेख्ने गरी फ्याँकेको हुनुपर्छ । बार्दली उस्तै छ, मात्र रङ उडेका छन् l मप्रतिको विश्वास गुमाएपछि यही बार्दलीमा उसले मलाई भुत्ल्याउँदा त्यतिवेला फूलहरू निमोठिएका थिए । गमलाहरू फुटेका थिए ।
म भित्रिँदा लिएर आएको विश्वासको गमला फुटिसकेपछिसँगै फुल्नुको अर्थ देखिनँ । खुला हृदयले पवित्र मन्दिर ठानेको यही घरका मेरा पदचापहरूलाई मेट्दै म बाहिरिएकी थिएँ । सायद यतै कतै अँझै पनि हुनुपर्छ मैले छोडेका त्यति बेलाका मेरा प्रमाणहरू l
‘सालिनी, तिमी मसँगै छ्यौ ?’
म झसङ्ग भएँ, डराएँ । अहिलेसम्म उसको हातमा बाँधिएर रहेका मेरा हातहरू फुत्किए । म बोलिनँ । विगतले घोचिरहेको थियो ।
मेरा नयनहरू मप्रति अन्याय हुँदा लुछिएका मेरा कपालका एक-एक रौँहरू खोजिरहेका थिए ।
मैले मेरो सपनाको सानो संसार चाहेकी थिएँ । मेरा साथीसंगीको जस्तै मेरो पनि आफ्नो घर होस् l मेरो आफ्नो सन्तान घरको आँगनीमा ढलिमली गरोस् l सन्तानको भविष्यको सुनिश्चितको लागि केही धन मौज्दात होस् । बस्, यही त थियो मेरो सपना । हरेक नारीको सपनाभन्दा के नै त्यस्तो भिन्न सपना थियो र ! उसले गलल्ल हाँसेर मेरो नराम्रो मजाक उडाएको थियो । मेरो सपना र चाहनाप्रतिको मजाकले विकसित गरेको घटनाक्रममा बढेको अविश्वास मेटाउन मैले थुप्रै समय खर्चिनुपरेको थियो ।
‘एक शब्द त बोलिदेऊ सालिनी,’ सकीनसकी फेरि बोल्यो l उसका आँखा रसाइसकेका थिए l मेरो भने मन रसाए पनि आँखा भने अँझै ओबानै थिए ।
‘पानी पिउछौ ?,’ बाध्यता थियो, बोलिदिएँ lपश्चाताप र आत्मग्लानिका थुप्रै भाव उसका मुहारमा छरपष्ट हुँदै गइरहेका थिए l नाजुक स्वास्थ्यका कारण उसले व्यक्त गर्न नसकेका भावना मैले बुझिरहेकी थिएँ । तर, केही भनिनँ । सोध्ने र केही भन्ने अधिकारबाट आफू वञ्चित भइसकेको मैले अनुभूति गरेकी थिएँ ।
हाम्रो दाम्पत्य जीवनको आधारशिला सामान्य अविश्वासमा टुंगिएको थियो l सम्बन्ध र हामीबीचको नाता नचाहेर पनि टाढा भइरहेको थियो । बिछोडको यो समय हामी एक-आपसबाट शून्यतामा हराइरहेका थियौं l तीन वर्षको वैदेशिक रोजगारीबाट म फर्किरहेकी थिएँ l भौतिक सुख-सुविधाका आफ्ना चाहनाहरू क्रमश: पूरा गर्दै थिएँ । बाँकी थियो त केवल पारिवारिक सुख मात्र ।
तीन महिनाको बिदामा जब मैले मेरो धर्ती टेकेँ, मलाई आफ्नो भन्नेले पर्खिएको महसुस भयो l विमानस्थलबाट मेरा पाइला अन्त कतै मोडिन चाहेनन् । आफ्नो भन्नेको आवश्यकताले बेस्कन मन पोलिरह्यो l आफैंले आफैंलाई सम्हालिरहँदा यत्तिकैमा बाटोमा कसैले भनिदियो – ‘तेरो मान्छे सिकिस्त बिरामी छ ।’
बिना कुनै संकोच उसको अनुहारलाई आँखाभरि सजाउँदै उसको घरभित्र पसेको थिएँ । जहाँ कुनै वेला मेरा पनि पसिना पोखिएका थिए, आँतका रगतहरू लत्पतिएका थिए । पस्नासाथै अघाउन्जेल उसलाई हेरेकी थिएँ ।
‘सालिनी, के तिमी सधैंको लागि मसँगै आएकी हौ ?,’ फेरि बोल्यो l उसको विनम्रतामा आशावादी सपनाहरू थिए ।
‘जीवन जिउनुको आवश्यकता तिमीले महसुस गर्‍यौ त ?,’ सोध्ने मन थियो, तर सकिनँ ।
उसको सोझोपन, इमान्दारी र आत्मग्लानि सँगसँगै व्यक्त भइरहेका थिए l केही सोधेर खाटा परिसकेको घाउ कोट्याउनु कुनै जरुरी ठानिनँ ।
‘तिम्रो अन्तर आत्माले चिन्छ, म को हुँ ?,’ भित्रैदेखि भक्कानिएको मनले सोधेँ ।
‘सालिनी मेरी सालिनी,’ केवल सासले बोल्यो ।
मैले सुनेँ । भक्कानिएर बेस्करी रोएँ । त्यो रुवाइमा मेरा पनि इमान्दारी प्रकट भएका थिए ।
कसैलाई व्यक्त गरेर हामीबीचको सम्बन्धबारे बहस-पैरवी गर्दै प्रमाण पेश गर्नुको कुनै आवश्यकता थिएन । बिना हिच्किचाहट म बाधिएँ उसको अँगालोमा । स्वास्थ्य बिग्रेर गलेको अवस्थामा पनि उसले सकेजति मलाई अँगालोमा कस्यो ।
लामो समयपछि अविश्वासको खडेरीले भताभुंग हुँदै गरेको घरको आँगनीमा खुसीको वर्षात् भइरहेको थियो । काप्दै र लर्खराउँदै ऊ घरको करेसामा गएर बेस्कन चिच्यायो – ‘सुप्रभा ! यी हेर त, तिम्रो मामु मैसँगै छ ।’
पारिवारिक सुखमा खुसी थप्न जन्मिएको केही महिनामै बितेकी हाम्री छोरी सुप्रभाको अभाव रहेको यो घडीमा म पनि बेस्करी रोएँ l आखिर रुनु पनि तपश्चाताप गर्नु रहेछ ।
राज सरगमको छाउघर विमोचित यस पछिको पोस्ट »
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : बिदाको सपना कथा: छोरीको जिन्दगी गीतकार कुमार पौडेलको गीति एल्वम मायाको फूल विमोचन लघुकथा – हिन्दी भाषा कथा – मायाको परिभाषा फुटपाथमा सुत्न कसलाई मन हुन्छ राज सरगमको छाउघर विमोचित नयाँ बर्षको आगमनसँगै कोरियामा काव्य सुधाको आरम्भ नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com